के फेरि झोलामा खुकुरी बोक्न थालिएको हो ? – sunpani.com
के फेरि झोलामा खुकुरी बोक्न थालिएको हो ?
सुनपानी । २ श्रावण २०७७, शुक्रबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – बाँकेमा एकै दिन दुई ठाउँमा खुकुरी हानाहान भयो । नेपालगञ्ज र राप्तीसोनारीमा खुकुरी प्रहारबाट एक-एक जना घाइते भए । राप्तीसोनारीका घाइते वीरबहादुर खत्रीलाई आज विहान थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ । नेपालगञ्जका घाइते अनुराग शाहको यही उपचार भइरहेको छ ।
राप्तीसोनारी काण्डमा चार जना र नेपालगञ्जको घटनामा दुई जनालाई प्रहरीले समातेको छ । अरु संलग्नको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
यी दुई घटनाले के फेरि बाँकेमा युवाहरु खुकुरी बोकेर हिड्न थालेका हुन् ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । झोलामा खुकुरी बोकेर हिड्न थालिएको हो भने जो पनि त्यसबाट पीडित हुन सक्छ । अनि बाँके प्रहरीप्रति प्रश्न तेर्सिन्छ, के हेरेर बसेको छ प्रहरी ? प्रहरी प्रमुख एसपी ओम रानाले गुण्डागर्दी, अपराध हुन दिन्न भनेर बोल्दै हिडेको देखिन्छ । यदि गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्ने हो भने त पहिला झोला खोतल्नु प¥यो नि, डन भन्नेहरुको । प्रहरीसँग ‘लिष्टै’ हुन्छ, उनीहरुको निगरानी बढाउनु प¥यो ।
बाँकेमा विक्रमसिंह थापा एसपी हुँदा गुण्डाहरुले खुकुरी बोक्न छोडेको चर्चा हुने गर्दछ । त्यतिबेला बाटोमा रहेका प्रहरीले लाइसेन्स जाँच गरेकोजसरी झोला जाँच गर्थे । झोलामा खुकुरी हाल्नु त परको कुरा भयो, सडकमा कोही चुरोट खादै हिड्दैनथे ।
बाँके प्रहरीले त्यो बेलाको जस्तो ‘डर’ पैदा गर्न आवश्यक देखिन्छ । अनि, घटनामा संलग्नलाई निर्मम कारबाही गरेर जादा यस्ता घटना दोहोरिने संभावना कम हुने सम्बद्धहरु बताउँछन् ।